Ama-Hormones Derivatives we-Cholesterol > Isifo sikashukela
Yini ama-cholesterol atholakala?
Indima etholakala ekolesterol ekwakhiweni kwamaseli obuchopho
Ososayensi bayaqiniseka ukuthi okutholwe yi-cholesterol ngakunye kufanele kunakwe. Baqinisa amasosha omzimba womuntu futhi bavikele emiphumeleni emibi yama-microorganisms ayingozi. Lezi zinto zivimbela ukukhula kwezifo eziningi ezibulalayo. Okususelwa ku-cholesterol kufaka i-bile acids.
Okubaluleke kakhulu kulokhu i-cholic acid. Lesi yisakhi esiyinhloko se-bile. Okunye okususelwa ku-cholesterol akufundiswanga ngokuphelele: izakhiwo ze-cholestanos zaziwa ngokuphelele. Kungokweqembu lama-steroid. I-Cholestanos inqwabelana emithanjeni ye-adrenal.
I-cholesterol ibhekana ne-oxidation, ngakho-ke kwakheka amakhompiyutha e-steroid. Ukuhlanganiswa kwama-bile acid kwenzeka esibindini. Okususelwa ku-cholesterol kufaka i-cholic, i-chenodeoxycholic acid. Ezinye zazo ziqukethwe i-bile ngendlela kasawoti. Ngenxa yama-asidi e-bile, ama-lipids adliwayo ahlanganisiwe.
Lapho i-duct ye-bile ivinjiwe, ukwakheka kwe-bile kuphazamiseka, ngenxa yalokhu i-hypovitaminosis iba (kukhona ukushoda kwamavithamini emzimbeni). Lokhu kungenxa yokuthi ngama-pathologies we-bile duct, ukumuncwa kwama-vithamini ancibilikisa amafutha kunzima.
Yimaphi ama-hormone avela ku-cholesterol? Izinhlobo ezinhlanu zamahomoni e-steroid ziyahlukaniswa. Balawula izinqubo eziyisisekelo emzimbeni.
I-progesterone iyadingeka ekuboneni: sibonga ngayo, iqanda lifakwa. Kuyadingeka ekukhuleni okuvumelanayo kwengane. IGlucocorticoids icindezela izinqubo zokuvuvukala emzimbeni.
AmaMineralocorticoids agcina ibhalansi ephelele kasawoti wamanzi emzimbeni: lapho ingasebenzi khona, umfutho wegazi lomuntu wehla kakhulu.
Ama-hormone e-Steroid enza ngokwezifiso imetabolism. Njengamanje, zitholakala futhi ngokutholakala. Ukutholwa okunjalo kwe-cholesterol ezindaweni zabo ezinhle akulona eliphansi kunabasunguli bemvelo.
Kubhekisa nakwizikweletu ze-cholesterol. Umuthi usiza ukumuncwa kwe-calcium, kudingekile ekwakhekeni kohlelo lwamathambo lomuntu, kwandisa ukumelana komzimba namagciwane.
Ama-Vitamin nezinto eziphuma kuwo alahlekelwa yizimpahla zawo ngesikhathi sokwelashwa okushisa kwemikhiqizo equkethe lezi zinto.
Kuvimbela ukuvela komdlavuza, kuthuthukisa ukusebenza kobuchopho.
IVithamini D nezinto eziphuma kuyo zisetshenziselwa ukwelapha i-sclerosis. Ngenxa yabo, uhlelo lwezinzwa lomuntu luyaqiniswa. Ngokuntuleka kwalezi zinto ezinganeni, kuvela ama-rickets. Kubantu abadala, ngokuntuleka kuka-vithamini, inhlala-mpilo iyanda, ukukhathala kuyenyuka, ukulala kuyaphazamiseka. Ngakho-ke, ukondleka kufanele kube nokulinganisela.
Odokotela baseSweden abasebenza esikhungweni saseCarolinae bafakazele ukuthi okuphuma ku-cholesterol kubalulekile ekugcineni imisebenzi eminingi yobuchopho. Bakholelwa ukuthi amangqamuzana aqukethe i-dopamine yehomoni kufanele aklanywe ngokwenziwe.
Ukuvela kwe-cholesterol kuvimbela ukukhula okuqinile kwamaseli we-stem, inani lama-dopamine neurons kuwo liyanda. Lokhu okutholakele sekuphenduke inguquko. Iziguli zikaParkinson zithole ithemba lokuthi zizolulama.
Izazi ze-Neurologists ziyaqiniseka ukuthi maduze nje kuzokwazi ukuthulula isampula elenziwe ngamakhompiyutha endaweni yamaseli obuchopho alimele. Lokhu kuzoba yindlela entsha yokwelapha izifo zobuchopho.
I-cholesterol ejwayelekile kwabesifazane ngemuva kweminyaka engama-40
Izinhlobonhlobo ze-cholesterol egazini
I-cholesterol ejwayelekile yabesifazane abangaphezu kweminyaka engama-40
Izimpawu nezimbangela ze-cholesterol ephezulu kwabesifazane ngemuva kweminyaka engama-40
Isimo se-cholesterol kwabesifazane ngemuva kweminyaka engama-40 siyizibalo eziyisisekelo lapho imiphumela yokuhlolwa kwegazi ihlala iqhathaniswa nanoma yisiphi isiguli sobudala udokotela wendawo noma udokotela womndeni. Ngoba eminyakeni yobudala engamashumi amane lapho i-premenopause iqala khona - ukukhiqizwa kwama-estrogens, okwakudala kudala "ithuba" elithile labesifazane futhi kwaba nomthelela kokuqukethwe kwe-cholesterol ephansi uma kuqhathaniswa nabesilisa, kuyancipha kancane kancane.
Njengoba sebewelile kulo mkhawulo wobudala, abesifazane akufanele bamangale lapho, kanye nokudluliselwa ekuhlolweni kwegazi okujwayelekile, bazothola isikhathi sokucwaninga ngamakhemikhali we-lipid parameter. Lokhu kuhlaziywa kubizwa iphrofayili ye-lipid noma iphrofayili ye-lipid (isimo). Uma, ngenxa yalokhu kuhlaziya, kuvezwa ukuphambuka okubalulekile kokujwayelekile, ikakhulukazi lapho umuntu esanda ukwanda, khona-ke ukuhlolwa ngudokotela wobuchwepheshe wezenhliziyo nodokotela oyi-endocrinologist kufanele.
Umzimba womuntu uqobo ukhiqiza ama-80% e-cholesterol edinga ukwakha ulwelwesi lwamangqamuzana, i-metabolism ejwayelekile, ukwakheka kwama-hormone, ama-asidi acid ne-vithamini D. Ama-20% asele kufanele atholakale ngokudla. Onke lamafutha, kanye nalawo ahlanganiswe esibindini futhi akhishwe ekudleni, anesakhiwo esihlukile futhi angaba "muhle" noma "ababi".
Ngemuva kokuthi uthole iphrofayili ye-lipid ezandleni zakho, ungabona izinkomba ezilandelayo:
I-LDL (beta-lipoproteins) ngama-lipoprotein aphansi kwabantu. Bangumthombo wokwakheka kwama-vasipha plaque yingakho sebethole igama elifanayo elithi "kubi".
I-HDL (alpha lipoproteins) - ama-lipoproteins aphezulu kakhulu. Babhekwa “njengabahle” ngoba basiza ukususa i-cholesterol eyeqile emangqamuzaneni omzimba.
Ama-Triglycerides amafomu akhethekile amakhemikhali atholakala emafutheni okudla noma ahlanganiswe emzimbeni kusuka kuma-carbohydrate. Ifakwe kumaseli wamafutha futhi isetshenziswa uma kunesidingo esikhulu samandla. Ukwanda okubukhali kubangela i-pancreatitis.
I-OXS isiyonke i-cholesterol. Kuyisamba se-HDL ne-LDL. Ngokuvamile, ama-60-70% e-cholesterol ephelele yi-LDL.
Inothi. Ngesikhathi sokuthathwa kwesimo se-lipid, isici esingesihle ngokwengeziwe akusona ukwanda, kepha ukwehla (!) Ku-HDL. Ngenani eliphakeme le-triglycerides, izinga le-LDL ekuhlaziyeni alilungile, futhi ivelu yalo lithathelwa indawo yinkomba ekhethekile "okungeyona HDL" = OXC - HDL.
I-WHO incoma ngokusemthethweni ukuthi abesilisa nabesifazane, kusukela beneminyaka engama-20 ubudala, bahlolwe i-cholesterol kanye njalo eminyakeni emi-5. Noma kunjalo, ukuze uphendule ngesikhathi futhi uvikele ukufakwa kwe-atherosulinotic emikhunjini kanye nokuthuthukiswa kwesifo senhliziyo, ngisho nabesifazane abanempilo ngemuva kweminyaka engama-40 bayanconywa ukuba benze ucwaningo lwe-biochemical of venous yegazi le-cholesterol okungenani kanye ngonyaka.
Ukuhlukanisa umehluko wokutholwa, kungahlolwa ukunakekelwa kwegazi okune-biochemical (ama-enzyme, ama-hormone, amaprotheni asebenzayo) nezifundo ezinamandla zezitho zangaphakathi.
Ngaphandle, kokubili i-cholesterol ephezulu nephansi ayikhombisi zimpawu zokuziphatha. Kodwa-ke, izimpawu eziqondile zeleveli ephezulu ebilokhu ibambe isikhathi eside zingaba buhlungu enhliziyweni kanye / noma ukusinda emilenzeni.
Imvelo ye-cholesterol yegazi kwabesifazane ngemuva kweminyaka engama-40 ingaba phezulu ngalezi zizathu ezilandelayo:
amanani wegazi azinzile angaphezu kwe-140/90,
i-pathology yemithambo yegazi,
yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela
kwehle ukusebenza kwe-yegilo,
i-pathology yesibindi nezinso,
ukukhula kwe-hormone yokukhula,
indlela yokuphila yokuhlala phansi, ukukhuluphala ngokweqile, ukudla okungalinganiseli, utshwala, ukubhema.
Ngendlela, kunombono wokuthi utshwala busiza ukugcina inani elijwayelekile le-cholesterol ephelele. Impela, noma ngabe uphuza kabi utshwala, i-cholesterol ephelele ingahlala ijwayelekile, kepha ukulingana phakathi kwezakhi zayo ezishintsha ngokwezimali - umzimba uyeka ukukhiqiza ama- “lipid” amahle futhi kunokuphikisana okuyingozi kulabo “ababi”.
Inothi. Usebenzisa ifomula yeFriedewald: LDL = OXS - HDL - (0,2 x triglycerides) mg / dL, udokotela wezinhliziyo unokuhlola ukuthambekela kokuthuthukisa ukulimala kwemithambo ye-atherosclerotic noma ngenani elijwayelekile le-OXC.
Kungenzeka ukusula izindonga zemithambo yegazi kusuka kuma-cholesterol plaque kuphela ngendlela esebenzayo, futhi umuthi awukakwazi ukumisa ukwakheka kwabo - ukuthatha imishanguzo yesimanje kuzosiza kuphela ukubambezela ukuthuthukiswa kwale nqubo. Akusizi ngalutho futhi sincike kwezinye izindlela zokwelapha noma zokwelapha ezingejwayelekile. Abakwazi ngisho nokubhekana nengxenye nalo msebenzi.
Kulabo besifazane abatholwe ukuthi bane-cholesterol ephezulu, okokuqala, bazocelwa ukuba bazame ukuwehlisa ngaphandle kwemithi - bayeke ukubhema, basebenzise kabi utshwala, balale amahora angu-8 ngosuku, benze kahle imisebenzi yansuku zonke yokuzivocavoca, banciphise isisindo futhi banamathele kuma-anti-cholesterol - ukudla okwehlisa i-lipid. Kulokhu, kufanele wazi isilinganiso. Ukulandela ukudla okuqinile ngokweqile kungathinta hhayi kuphela ngokomzimba kepha futhi nangokwengqondo.
Esimweni lapho ukuzama ukwehlisa i-cholesterol kuphela ngosizo lomsebenzi wokuzivocavoca nokunamathela ekudleni kwe-anticholesterol akuzange kulethe umphumela oyifunayo, futhi futhi uma i-hypercholesterolemia ibangelwa izifo lapho izinga le-OXS liphakeme ngokuqinile kune-6.22 mmol / l, ukwelashwa okuqondile kunqunyelwe.
Indlela eyinhloko yokwelashwa kwezidakamizwa kwe-cholesterol ephezulu kungukuphathwa kwempilo yonke yama-statins, okungangezwa ngokwengeziwe izidakamizwa ze-antihypertensive, i-sequeching bile acids, i-fibroic acid derivatives, i-cholesterolorpio inhibitors. Kwesinye isikhathi ama-statin angashintshwa noma anezelwe ngeNiacin.
Izimo zikwazile ukumisa inqubo yokuvilapha evilaphayo emithanjeni yegazi futhi zibe nomphumela ovimbelayo ekukhiqizweni kwe-cholesterol ngesibindi, kunciphise ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo futhi ngenxa yalokho kunomthelela ekwandiseni impilo.
Ukunaka! Izimo azibanga umlutha. Ngemuva kokukhanselwa kwabo, izinga le-cholesterol lizobuyela ezingeni lakhona lasekuqaleni, kepha ngeke linyuke amahlandla ama-2. Ukuphendula okuhlukile kuma-statins kukhona i-sporadic, futhi izinzuzo zokuzithatha ziphakeme kaningi ngaphezu kwengozi yokuthola imiphumela enjalo.
Abesifazane abalandelayo ngemuva kwama-40 ngokuqinisekile ngeke basebenze ngaphandle kokwelashwa okuthile ngamibhede:
umlando wokuhlaselwa yisifo sohlangothi, ukushaya kwenhliziyo, i-angina pectoris, ukuhlaselwa kwesikhashana, ukuqaqanjelwa kwe-coronary Syndrome, ukuvuselelwa komzimba kanye nokulimala komthambo,
abanesifo sikashukela abane-LDL 70-189 mg / dl,
ngokukhuphuka kwama-lipoproteins aphansi kakhulu> 189 mg / dl,
uma ukuhlolwa kweprotheni e-c-reactive, i-fibrinogen kanye / noma i-Homocysteine ​​kuyinto engajwayelekile,
ababhemayo kakhulu nalabo abenqaba ukushintshela empilweni enempilo.
Futhi ekuphetheni, singeza ukuthi ukwethuka ngaphambi kwesikhathi akusifanele - kwabesifazane abangaphezu kweminyaka engamashumi amane, ukwanda kancane kancane kwe-cholesterol kungokomzimba futhi akubhekwa njenge-pathology. Ngaphezu kwalokho, imiphumela yokuhlaziywa ingabangelwa ukulungiselela okungafanele kwabesifazane kulolu cwaningo, amalungiselelo elabhoratri anekhwalithi engemihle noma amaphutha asemishini asiza owokusebenza kwelabhoratri. Kufanele usiphinde isifundo bese wenza isikhathi sokuhlangana nesazi sezinhliziyo.
Umbuzo 21 Indima yemvelo yezithunywa zesibili ekuhanjisweni kwezimpawu zamahomoni
Indlela ejwayelekile esetshenziswayo lapho imiphumela yemvelo yezithunywa “zesibili” itholakala ngaphakathi esitokisini inqubo yokuqanjwa kwamaphosphorylation - ukudonswa kwamaprotheni ngokubamba iqhaza kwezinhlobonhlobo zamaprotheni anikezela ukuhambisa kweqembu lokugcina kusuka emaqenjini e-ATP kuya emaqenjini we-OH we-itine serine itreonine, futhi kwezinye izimo i-tyrosine yamaprotheni okuhloswe . Inqubo ye-phosphorylation ukuguqulwa kwamakhemikhali okubalulekile ngemuva kokuhumusha ngamakhemikhali amaprotheni aguqula ngokuyisisekelo ukusebenza kwawo kanye nokusebenza kwawo. Ikakhulu, kubangela ushintsho kuzakhiwo ezihlelekile (ukuhlangana noma ukwahlukaniswa kwezindawo ezingaphansi), ukusebenza noma ukuvimbela izakhiwo zabo zokusiza, ekugcineni kunquma izinga lokuphendula kwamakhemikhali kanye nomsebenzi wokusebenza wonke wamaseli.
22. Ama-hormone amaSteroid. I-Mechanism ne-blah blah blah
Ngokungafani ne-peptide, ama-hormone e-steroid angena kalula kulwelwesi lwama-plasma amangqamuzana futhi ahlanganyele nama-receptors awo kuma-cytoplasm kanye / noma i-nucleus yeseli elitshekile. Amanye ama-hormone ama-steroid receptors ama-oncoproteins (isb. ErbA). Wonke ama-receptors ama-steroid anesiza esibophayo se-DNA. Ngamanye amagama, ama-hormone ama-receptor ama-steroid ayizinto zokubhaliwe. Umphumela wokugcina wokusebenzisana kwehomoni ye-steroid ne-receptor yayo ukuguqula ukubonwa kwezakhi zofuzo ezibhaliwe. Ngakho-ke, umphumela wesenzo sama-hormone e-steroid kuseli okuqondiwe ukulethwa kokuhlanganiswa kwamaprotheni athile, okuguqula ngokuyisisekelo umetaboliki womabili amaseli okuqondiwe namanye amaseli amaningi omzimba. Amaprotheni enziwe ngaphansi kwethonya lama-steroid ama-hormone ngokwawo angaba ama-hormone noma amanye ama-molecule abalulekile ekusebenzeni kweseli, ngokwesibonelo, ama-enzyme. Ngemuva kokukhishwa kuseli le-endocrine, ama-hormone e-steroid angena egazini, lapho cishe ama-95% ama-hormone abopha amaprotheni athize okuhambisa (ama-transcortins, amaprotheni abopha i-testosterone, ama-albhamu ahlukahlukene nama-globulins). Ama-receptors ama-Steroid ahlukaniswa njengeqembu elinwebayo lama-receptors enuzi, futhi afaka ama-receptors ama-retinoids, i-Vitamin D3, triiodothyronine. Ngemuva kokuthi ama-molecule ama-hormone e-steroid afaka amaseli okuhlosiwe, angadala impendulo kuphela uma kunama-receptors athile e-intracellular aleli hormone esitokisini. Ngakho-ke, ama-receptor e-estrogen atholakala kumaseli okuhlosiwe esibelethweni, i-mammary gland kanye nengqondo. Amaseli wezinwele zezikhumba zesikhumba sobuso nezicubu ze-erectile zepipi ziqukethe ama-androgen receptors. Ama-receptors e-Glucocorticoid atholakala cishe kuwo wonke amaseli. Esitokisini esitshengisiwe, ikilasi ngalinye eliphambili lama-hormone e-sex steroid (ama-androgens, ama-estrogen, ama-progestin) enza ukuthuthukiswa kwechungechunge lezenzakalo ezibandakanya (I) ukubopha kwe-steroid kwi-receptor yayo, (I) izinguquko zemibono yokuhlangana kwesakhiwo se-receptor, ukudlulisela i-receptor kusuka kwifomu elingasebenzi isebenze , (III) ukubopha kwe-steroid receptor eyinkimbinkimbi yezakhi zomthetho ze-DNA, (IV) nokuqanjwa kwamangqamuzana amasha e-m-RNA, (V) ukuhumusha kwe-m-RNA nokuhlanganiswa kwamaprotheni amasha. Ngesikhathi sokubhalwa, i-RNA polymerase II ibopha kumphakamisi, isiza esithile se-molecule ye-DNA, okuvela kuyo ukuqalwa kwepolymer. I-RNA polymerase II isakaza ingxenye ye-DNA helix, iveze i-matrix yokuhlanganisa okuyisisekelo. Lapho i-polymerase ye-RNA ihlangana nesiginali yokuqoshwa kokubhaliwe, ukwakheka kwe-polymer kuyanqanyulwa. Ulwazi oluningi lwe-pharmacological kanye nolwemvelo lwendlela yokusebenza kwama-hormone e-steroid lwatholwa ngesisekelo sezifundo zama-receptors e-steroid.Ukusebenza kwama-hormone e-steroid kuncike ekuhlobaneni kwe-receptor ye-hormone noma i-analogue yayo yemithi, kanye nasekusebenzeni kwe-hormone ye-receptor evumelanisa konke ekwenziweni komthetho kokubhaliwe.
23. Umshini wokusebenza kwama-protein ama-protein ....
Amasu okusebenza kwe-peptide, ama-protein ama-protein nama-catecholamines. ULigand. I-molecule ye-hormone ibizwa ngokuthi umlamuli oyinhloko womphumela wokulawula, noma i-ligand. Ama-molecule ama-hormone amaningi abopha kuma-receptor awo athile kulwelwesi lwama-plasma amaseli kwelitshe, enza inhlanganisela ye-ligand-receptor. I-peptide, ama-hormone ama-protein kanye ne-catecholamines, ukwakheka kwayo kuyisixhumanisi sokuqala esiyinhloko esenzweni sokusebenza futhi kuholele ekusebenzeni kwama-enzymes we-membrane kanye nokwenziwa kwama-mediators ahlukahlukene wesayensi yemiphumela yokulawulwa kwe-hormonal, aqaphela isenzo sabo ku-cytoplasm, organoids, ne-cell nucleus. Phakathi kwama-enzyme asebenze yi-ligand-receptor tata, i-adenylate cyclase, i-guanylate cyclase, i-phospholipases C, D ne-A2, i-tyrosine kinases, i-phosphattyrosine phosphatases, i-phosphoinositide-3-OH kinase, i-serine threonine kinase, ne-synthase. kwakheka ngaphansi kwethonya la ma-enzyme we-membrane yilezi: 1) cyclic adenosine monophosphate (cAMP), 2) cyclic guanosine monophosphate (cGMP), 3) inositol-3-phosphate (IPF), 4) diacylglycerol, 5) oligo (A) (2, 5-oligoisoadenylate), 6) Ca2 +
Indima ye-biochemical of nucleotides in metabolism
Ama-Nucleotides - ama-phosphoric esters ama-nucleoside, i-nucleoside phosphates. Ama-nucleotides wamahhala, ikakhulukazi i-ATP, i-cAMP, i-ADP, adlala indima ebaluleke kakhulu kwinqubo yezinqubo zamandla nolwazi, futhi futhi ayizingxenye zama-acid ze-nitic acid kanye nama-coenzymes amaningi. Indima ye-biochemical of nucleotides:
Umthombo wamandla we-Universal (i-ATP kanye ne-analogues yayo).
Bayizishoshovu nezithwali zezimo ezikhohlisayo esitokisini (i-UDP-ushukela)
Sebenza njengama-coenzymes (FAD, FMN, NAD +, NADF +)
Ama-cyclic mononucleotides angabalamuli besibili ekusebenzeni kwama-hormone nezinye izimpawu (i-cAMP, cGMP).
Abalawuli be-allosteric yomsebenzi we-enzyme.
Zi-monomers ekwakhiweni kwama-nucleic acids ahlanganiswe ngamabhondi we-3'-5'-phosphodiester.
Umehluko nokufana ngesakhiwo se-DNA ne-RNA
I-Deoxyribonucleic acid (i-DNA) iyi-macromolecule (enye yezihloko ezintathu, ezinye ezimbili ziyi-RNA namaprotheni), okunikeza ukugcinwa, ukudluliselwa kusuka kwesinye isizukulwane kuya kwesinye kanye nokuqaliswa kohlelo lofuzo lokukhulisa nokusebenza kwezinto eziphilayo. I-DNA inemininingwane yokwakheka kwezinhlobo ezahlukahlukene ze-RNA namaprotheni.
Ngombono wamakhemikhali, i-DNA imolekyuli ende ye-polymer equkethe amabhlogo aphindaphindwayo - ama-nucleotides. I-nucleotide ngayinye iqukethe isizinda se-nitrogenous, ushukela (deoxyribose) neqembu le-phosphate. Izibopho phakathi kwama-nucleotides kwiseketeni akhiwa ngenxa ye-deoxyribose neqembu le-phosphate (ama-phosphodiester bond). Ebuchotsheni obuningi bamacala (ngaphandle kwamagciwane athile aqukethe i-DNA enemicu eyodwa), i-macromolecule ye-DNA inamaketanga amabili aqondiswe izisekelo ze-nitrogenous komunye nomunye. Le molekyuli enemigqa ephindwe kabili iyagcotshwa. Ngokuvamile, ukwakheka kwengqamuzana le-DNA kubizwa ngokuthi “double helix”.
Izinhlobo ezine zezisekelo ze-nitrogenous zitholakala kwi-DNA (i-adenine, i-guanine, i-thymine ne-cytosine). Izisekelo ze-nitrogenous zelinye lamaketanga zixhunywe kuzisekelo ze-nitrogenous zelinye iketane ngamabhondi e-hydrogen ngokomthetho wokuhambisana: i-adenine ibopha kuphela i-thymine, i-guanine - kuphela ku-cytosine. Ukulandelanisa kwe-nucleotide kukuvumela ukuthi "uvimbe" imininingwane mayelana nezinhlobo ezahlukahlukene ze-RNA, okubaluleke kakhulu kuzo imininingwane noma i-matrix (mRNA), i-ribosomal (rRNA) kanye nezokuthutha (tRNA). Zonke lezi zinhlobo ze-RNA zenziwa nge-matrix ye-DNA ngokukopisha ukulandelana kwe-DNA ngokulandelana kwe-RNA okwenziwe ngesikhathi sokubhalwa futhi kubamba iqhaza ku-protein biosynthesis (inqubo yokuhumusha). Ngaphezu kokulandelana kokufaka amakhodi, i-DNA yeseli iqukethe ukulandelana okwenza imisebenzi yokulawula nokuhleleka.
I-Ribonucleic acid (RNA) ingelinye lama-macromolecule amathathu (amanye amabili angama-DNA namaprotheni), atholakala kumaseli wazo zonke izinto eziphilayo.
NjengeDNA (deoxyribonucleic acid), i-RNA iqukethe uchungechunge olude lapho isixhumanisi ngasinye sibizwa ngokuthi yi-nucleotide. I-nucleotide ngayinye iqukethe isizinda se-nitrogenous, ushukela we-ribose neqembu le-phosphate. Ukulandelana kwe-nucleotide kuvumela i-RNA ukufaka imininingwane yezakhi zofuzo. Zonke izinto eziphilayo zisebenzisa i-RNA (mRNA) ukwenza uhlelo lokuqalwa kwamaprotheni.
Ama-RNA nucleotides aqukethe ushukela - ubambo, okufakwa kulo esinye sezisekelo endaweni engu-1 ': adenine, guanine, cytosine noma uracil. Iqembu le-phosphate lixhumanisa imbambo ngeketeni, lenze izibopho ne-athomu le-3 'lekhabhoni lembambo eyodwa nasendaweni engu-5' yelinye. Amaqembu we-phosphate ku-pH yemvelo ashajwa ngokungafanele, ngakho-ke i-RNA yi-polyanion. I-RNA ibhalwe njenge-polymer yezisekelo ezine (i-adenine (A), i-guanine (G), i-uracil (U) ne-cytosine (C), kepha kunezisekelo eziningi eziguquliwe noshukela ku "RNA" ovuthiwe. Sekukonke, kunezinhlobo ezingaba ngu-100 ezahlukahlukene ze-nodiotides ezilungisiwe ku-RNA.
Izisekelo ze-nitrogenous ekwakhiweni kwe-RNA zingakha izibopho ze-hydrogen phakathi kwe-cytosine ne-guanine, i-adenine ne-uracil, kanye naphakathi kwe-guanine ne-uracil. Noma kunjalo, okunye ukusebenzisana kungenzeka, ngokwesibonelo, ama-adenines amaningana angakha i-loop, noma i-loop equkethe ama-nucleotides amane, lapho kukhona khona i-adenine - izisekelo ze-guanine.
Isici esibalulekile sokuhleleka kwe-RNA esihlukanisa phakathi ne-DNA ukuba khona kweqembu le-hydroxyl endaweni emi-2 'yembambo, evumela ukuthi i-molecule ye-RNA ibe khona ku-A, kune-conf conf, evame ukubonwa kakhulu kwiDNA. Ifomu le-A line-groove enkulu futhi emincane emincane ne-groove encane futhi engajulile. Umphumela wesibili wokuba khona kweqembu le-2 'hydroxyl ukuthi ipulasitiki eyisimanga, okungukuthi, engabambi iqhaza ekwakhiweni kwe-helix ephindwe kabili, izingxenye ze-molecule ye-RNA zingakwazi ukuhlasela ngamakhemikhali ezinye zezibopho ze-phosphate futhi zizisuse.
Uhlobo “olusebenzayo” lwe-molecule ye-RNA enemigqa eyodwa, njengaleyo yamaphrotheni, imvamisa inesakhiwo semfundo ephakeme. Isakhiwo semfundo ephakeme sakhiwa ngesisekelo sezinto zesakhiwo sesibili esakhiwa ngamabhondi e-hydrogen ngaphakathi kwe-mocule eyodwa. Kunezinhlobo eziningi zezakhi zesakhiwo sesibili - iziqu zesikhonkwane, izingodo kanye nama-pseudo-node.
Kunokwehlukana okuyinhloko phakathi kweDNA ne-RNA:
I-DNA iqukethe ushukela we-deoxyribose, i-RNA iqukethe i-ribose, enokwengeziwe, ngokuqhathaniswa ne-deoxyribose, iqembu le-hydroxyl. Leli qembu likhulisa amathuba okuba i-hydrolysis ye-molecule, okungukuthi, inciphise ukuqina kwe-molecule ye-RNA.
I-nucleotide ehambisana ne-adenine kwi-RNA akuyona i-thymine, njengakwi-DNA, kepha i-uracil iyindlela ye-thymine engakhethi.
I-DNA ikhona ngendlela ye-helix ephindwe kabili eyenziwe ngamangqamuzana amabili ahlukene. Ama-molekyuli we-RNA, ngokwesilinganiso, amafushane kakhulu futhi anamandla munye.
Ukuhlaziywa kwesakhiwo kwama-molekyuli e-RNA asebenza ngokuphila, kufaka phakathi i-tRNA, i-rRNA, i-snRNA namanye ama-molecule angasebenzisi amaprotheni, kukhombisile ukuthi awahlanganisi i-helix eyodwa, kepha ngeziphetho eziningi ezimfushane eziseduzane futhi zakha into efana nale Isakhiwo samaphrotheni. Njengomphumela walokhu, i-RNA ingashukumisa ukusabela kwamakhemikhali, ngokwesibonelo, isikhungo sokudluliswa kwe-peptidyl yer ribosome esibandakanyeka ekwakhekeni kwesibopho samaprotheni siqukethe ngokuphelele i-RNA.
Izinzuzo ze-cholesterol - kuyini
I-cholesterol iyisici esibalulekile se-membrane yeseli. Kwakha amakhemikhali ambalwa emzimbeni wethu. Izinto eziphathelene nokusebenza kwezinto eziphilayo, ukukhiqizwa kwazo kuncike kwikholesterol, kubhalwe ngezansi:
Ama-Steroids: ama-cortisol ama-hormone, i-aldosterone,
Kanye nama-hormone ocansi abesifazane nawabesilisa: ama-estrogener, i-progesterone, i-testosterone,
Synthesis of bile acid.
I-cholesterol isuselwa ku-mevalonic acid. Ukwakheka kwe-mevalonate kwenziwa kusuka ku-acetate esebenzayo. Ngemuva kwalokho kwakhiwa i-squalene, bese kuthi i-cholesterol isivele ibuyiswe kuyo. Imvamisa, uma kungekho zici zofuzo, ama-molekyuli we-DNA yomuntu ahlelwe kwangaphambili ukulungiselela ukulawula ukukhiqizwa kwenani le-cholesterol eyanele.
Uyini lo mfanekiso futhi yini imisebenzi yawo?
I-cholesterol noma i-cholesterol isuselwa kwezinye izinhlobo ezinjengotshwala. Sitholakala ekujuleni okuphezulu kwezicubu zezinzwa nezicubu ezinamafutha. Kepha ngaphezulu esibindini.
I-cholesterol yenza imisebenzi eminingi ebalulekile:
Ukwakhiwa kolwelwesi lwama-hepatocytes. Ama-molecule we-cholesterol afakwe ngaphakathi ezindongeni zeseli zesibindi.
Ukugaya. Ekubunjweni kwama-bile acid, i-cholesterol ibamba iqhaza ngokugaya ekudleni kokudla kwemvelaphi yezilwane. Ngokubambisana ne-bile, ingena emathunjini, lapho igxilisa khona amafutha.
Ukusabalalisa ngokuhamba kwegazi njengengxenye yama-lipoprotein, onomphumela omuhle noma ongemuhle emikhunjini. Uma i-cholesterol igxiliwe kuma-lipoprotein aphansi noma aphansi kakhulu, iyakwazi ukuqongelela ekuthambekeni kwemithambo yegazi nayo, ibambe iqhaza ekuwohlokeni kwe-atherosulinotic.
I-biosynthesis yama-hormone e-steroid. Ngokusekelwe ku-cholesterol, kukhiqizwa izinto ezisebenza ngama-hormone - ama-glucocorticosteroids, ama-mineralocorticoids, ama-steroids abesilisa nabesifazane.
I-Biotransformation ye-cholecalciferol. IVithamini ibamba iqhaza elibonakalayo ekwakhiweni kohlelo lwe-musculoskeletal.
I-cholesterol ibandakanyeka ngqo ekwakhiweni kwe-bile. Ukukhiqizwa okuyinhloko kwenzeka esibindini, bese i-bile igcinwa esikhonzeni senyongo. Ukwembiwa kwe-bile emzimbeni onempilo kuqala kuphela ngesikhathi sokudla. Imisebenzi eyinhloko ye-bile acid emzimbeni ifaka:
Ukufakwa emzimbeni kwamavithamini ekudleni
Ukuqothuka kwama-steroid wemvelaphi yezitshalo,
Running motility motility.
Ngamanye amagama, i-bile ibandakanyeka kokufakwa kwezinto ezingamanzi. Lapho uxhumana nama-enzyme e-pancreatic, i-bile igcina acidity evamile emathunjini amancane.
Okususelwa ku-Cholesterol Molecule
Kulezi zinto, ama-hormone ocansi abesifazane nabesilisa, ama-adrenal mineralocorticoids nama-glucocorticosteroids avela. I-cholesterol nayo ifakiwe kuma-enzymes wokugaya aphathelene nokugaya amaprotheni namafutha. Okokuqala, lawa ngamafutha acid ne-bile ngokwayo. I-cholesterol iyingxenye yesakhiwo sezinto eziphilayo ezisebenza ngokufanelekile ekudluliseleni amasignali kusuka kwesinye isakhiwo seseli kuya kwesinye. Ama-molecule we-cholesterol angena ekuhlanganiseni kwe-cholecalciferol - uvithamini D.
Le monocarboxylic trioxy acid yakhiwa kumaseli wesibindi ngesikhathi senqubo ye-cholesterol oxidation. Kungokwesigaba sama-bile acids ayisisekelo. Kufika kuma-300 mg akhiqizwa emzimbeni womuntu ngosuku. Ebangeni lesinyongo, kuhlangana ne-taurine, kanye ne-glycine. Ngendlela yokuhlanganiswa kwamakhemikhali anjengamakhemikhali, i-bile ayithinteki kalula ekwakhekeni kwemali enosawoti emgodini we-biliary kanye namathumbu.
Ngokushoda kwale nto emzimbeni, kunconywa ukusetshenziswa kwamalungiselelo emithi emaphaketheni amaphilisi.
I-Deoxycholic, chenodeoxycholic kanye ne-lithocholic acid
I-Chenodeoxycholic futhi ibhekisela kokuyinhloko futhi isuselwa ku-oxidation ye-cholesterol kumaseli wesibindi. Cishe i-30% yenani eliphelele lama-asidi acid liwela ku-chenodeoxycholic.
Ebantwini, le nto ibandakanyeka ekugayweni nasekuqhekekeni kwe-cholesterol. Amalungiselelo wemithi asuselwa kule acid asetshenziselwa ukwelapha isifo se-gallstone. Umphumela wesidakamizwa uzosebenza kuphela uma itshe lisuselwa ku-cholesterol, ngaphandle kokubala.
I-Deoxycholic ne-lithocholic ama-asidi wesibili we-bile. Ziyisisekelo esiyisisekelo esiveziwe kuma-colon microorganisms. Lezi zingxenye ezimbili zibamba iqhaza kulawulo lwe-lipid metabolism futhi zivuse ukumbiwa kwe-cholesterol kuma-hepatocytes.
Ama-hormone ama-derivative noma ama-steroid
Izinto ze-Hormonal eziqukethe i-cholesterol, zingezozindlala zocansi kanye ne-adrenal. Phakathi kwazo kukhona:
I-testosterone yowesilisa ne-androgen. Banesibopho sokuvela kwezimpawu zesibili zocansi kanye ne-spermatogenesis - ukwakheka kwe-spermatozoa ekwazi ukufaka umquba iqanda. I-testosterone ne-cholesterol banobudlelwano obucacile, uma unaka ukulingana kwabo egazini lomuntu.
Amahomoni ocansi abesifazane. I-cholesterol ifakwe kuyi-estrogen.
Ama-Mineralocorticoids wezindlala ze-adrenal.
Babizwa ngokuthi yi-bile. Lokhu kususelwa ku-cholesterol kwenziwa ngokuqondile kuma-hepatocytes. Njengezakhi ze-bile, zisiza ekuguquleni amafutha ezilwane ekubeni ama-molecule okulula ukuwathola. Le nqubo ye-hydrolysis yenzeka emgodini wesisu esincane. Ama-acid e-Bile ahlukaniswe ama-subtypes alandelayo:
Cholevaya. Kuyisisekelo. Le nto iyakwazi ukwakha ngaphansi kwethonya lama-enzyme e-hydroxylase. Sekuvele kuwo ama-glycocholic nama-asidi we-taurocholic. Aqukethe ama-radicals we-hydrophilic kanye ne-hydrophobic steroid nuclei.
I-Deoxycholic. Le nto ingumkhiqizo wesibili we-cholic acid. Isiza ekunciphiseni amafutha.
I-Chenodeoxycholic. Kuyi-bile acid yokuqala. Ukwakheka kwama-molecule kwenzeka ngaphansi kwethonya le-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate.
I-Litocholeic. Izinhlayiya zingokwesibili. Ukuhlushwa kuphansi kakhulu uma kuqhathaniswa nama-asidi angenhla.
Ibizwa nangokuthi i-Vitamin D. Lokhu kwakhiwa yi-cleavage ye-cyclopentanperhydrophenan mukomae ring. Ngemuva kwalokhu, i-hydroxylation yama-molecule abunjiwe ngokuhlanganyela kwe-oxygen. Umphumela walezi zinqubo ze-biochemical ukudalwa kwe-calcitriol, lapho kwavela khona ifomu lokugcina lika-Vitamin D.Lokugcina kubandakanyeka ekufakweni kwama-athomu we-calcium ezingxenyeni eziqinile zohlelo lwe-musculoskeletal.
Akunakwenzeka ukuthola i-Vitamin D ngaphandle kwale khompiyutha. Buyela kuthebula lokuqukethwe
Imisebenzi nezinzuzo zokutholwa kwe-cholesterol
Ama-acid e-Bile esehlukanisiwe futhi njengengxenye ye-bile abandakanyeka ngamandla ku-hydrolysis yezinto eziyinkimbinkimbi zemvelaphi yezilwane. Ngakho-ke, zivusa ukugaya kwenyama emathunjini amancane. I-cholesterol nama-hormone nawo anobudlelwano obucacile. Ngaphandle kwezidakamizwa ezibandakanya ama-hormone ocansi ezowesilisa noma abesifazane, abantu bobulili obuhlukile azikhombisanga zimpawu zesibili, okuyiqiniso lesiya simo sokuzala. Futhi ama-steroid adrenal anomthelela oqondile kuzo zonke izitho nezinhlelo, aqinisekisa ukukhula kwawo nokusebenza kwawo. Ngaphandle kokunye okususelwa ku-cholesterol, i-cholecalciferol, amathambo abantu abe nezimo futhi abe mncane. Ezinganeni ezinokulimazeka kwe-Vitamin D noma ukuntuleka kwe-cholesterol, kwakheka isifo esinzima - ama-rickets. Futhi, ngokusweleka, izilonda ze-autoimmune zenzeka futhi ziyaqhubeka.
Ama-progestin ama-hormone ocansi abesifazane, ama-cholesterol avela ekukhiqizeni ama-ovari kanye nezindlala ze-adrenal. Lawa ma-hormone abandakanyeka ekusekeleni ukukhulelwa nasekulungiseleleni i-endometrium yesibeletho yokulungisa iqanda elivundisiwe. Ngokukhiqizwa okujwayelekile kwama-progestin, ubungozi be-fibrous neoplasms esifubeni kanye nama-cysts kuma-ovari ancishisiwe.
Ama-Glucocorticosteroids angukhiye we-cholesterol obalulekile womzimba akhiqizwa kuyi-adrenal cortex. Imisebenzi esemqoka yalawa mahomoni e-steroid afaka lokhu okulandelayo:
Anti-shock kanye nokulwa nokucindezela,
Ukubamba iqhaza kwe-metabolism yamandla, ukwanda kwe-glycogen,
Vimbela ukuvela kwe-hypoglycemia,
Bamba iqhaza kumthethonqubo wokugonywa,
Yehlisa ukusabela kokuvuvukala
Ikakhulu, i-cortisol, esuselwa ku-cholesterol, inesibopho se-metabolism yama-carbohydrate, futhi futhi ikhulisa izinsiza zamandla.
Ama-Mineralocorticoids alawula imetabolism yamanzi-usawoti. I-Aldosterone, esuselwa ku-cholesterol, ihamba phambili kulokhu okukhasayo futhi ikhiqizwa yizindlala ze-adrenal. Le steroid ibandakanyeka ekuphatheni umfutho wegazi. Ngasikhathi sinye, isiza izicubu ukuba zigcine inani lamanzi elifunekayo. Ngakho-ke, i-turgor kanye nokuqina kwesikhumba kugcinwa.
Ama-Androgens kanye nama-estrogens
Ama-Androgens, avela ku-cholesterol, afaka ama-hormone ocansi abesilisa. Ama-Androgens akhulisa ukukhiqizwa kwamaprotheni, ngenkathi evimbela ukubola kwawo. Shesha i-glucose metabolism futhi uvikele i-hyperglycemia. Ama-Androgens asiza ukwandisa izicubu namandla, anciphisa inani lamafutha angaphansi. I-testosterone, esuselwa ku-cholesterol, inesibopho sokwenza ukuthuthukiswa kwezimpawu zobudoda zesibili emadodeni.
Ama-estrogens ama-hormone ocansi abesifazane akhiqizwa yizindlala ze-adrenal, kuma-ovari abesifazane kanye nasezivivinyweni zamadoda. I-estrogen, okuvela ku-cholesterol, ibandakanyeka kumjikelezo wokuya esikhathini futhi inesibopho sokuzala kwabesifazane. Ama-estrogens asiza ukunciphisa "i-lipids" eyingozi "ne-cholesterol egazini, ngenkathi ikhulisa ama-triglycerides. Lokhu kuvusa ukuhlanganiswa kwama-lipids okudla, noma i-lipoprotein ephezulu kwabantu. Nabo banegalelo ekwandeni kwenani le-iron ezithweni nasegazini elijwayelekile.
Vitamin D no Cholestanos
IVitamin D, isuselwa ku-cholesterol, ikhiqizwa ngokuthintana nesikhumba semisebe yelanga, ebangela inqubo yokuqamba. Le vithamini isiza umzimba ukuthola i-magnesium, i-calcium, ngaleyo ndlela ibambe iqhaza enqubekweni yokukhula kanye nokuthuthukiswa kwamathambo, amazinyo. IVitamin D futhi ilawula ukukhiqizwa kwe-insulin futhi ibandakanyeka ekudleni kwe-phosphorus.
I-cholestanos steroid, esuselwa ku-cholesterol, isaziwa kancane. Iqongelela kwizindlala ze-adrenal. Imininingwane yezici zayo ezisebenzayo iyafundwa.
Izici ezibalulekile zeVitamin D zifaka umphumela omuhle ohlelweni lwezinzwa nokuvinjiswa kwe-sclerosis. Ukukhiqizwa okwanele kwe-Vitamin D kuphambanisa ukwehla kwamathambo nokukhula kwamathambo.
I-cholesterol iyisakhi esiyinhloko ekwakhekeni kwamakhemikhali abaluleke kakhulu emzimbeni wethu. Ngokwesilinganiso, ukudla kwemvelaphi yezilwane kuyadingeka ukugcwalisa isidingo se-cholesterol. Kubalulekile ukugcina isimo se-lipid ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile, ngoba i-hypocholesterolemia iyingozi nje nge-hyperlipidemia.
Ayini ama-steroid nama-anabolics
Ngamafuphi, ama-steroid awawona amaphilisi wabakhi bomzimba be-novice, kodwa iqembu lama-hormone.
Kubandakanya ama-corticoids, akhiqizwa yi-adrenal cortex, nokuhlanganiswa komzimba okwenziwa ngamakhemikhali akhiqizwa yizindlala zocansi.
I-hormone yesilisa ebaluleke kakhulu yi-testosterone. Inemisebenzi emibili eyinhloko:
I-androgenic - ukuthuthukiswa kanye nokunakekelwa kwezimpawu zesibili zocansi ezibonakala kakhulu emadodeni (ilungiselelo eliyinqayizivele lokufakwa kwamafutha, izwi eliphansi, ukukhula kwezinwele ebusweni nase esifubeni, njll.),
I-anabolic - ukwakhiwa nokulondolozwa kwemisipha enobukhulu.
Bafunda ngendima yale nto maphakathi ne-thirties, ososayensi bazamile ukuyisebenzisa lapho bedala izidakamizwa zabantu abalahlekelwe yiziqubu zemisipha.
I-testosterone yemvelo yadedelwa ngokushesha okukhulu futhi ayifanelekile ukusetshenziswa. Ngemuva kwalokho ukusungulwa kwayo ngezakhiwo ezifanele kwasungulwa - 17 - alpha - alkylate, 17 - beta - ether no-1 - methyl.
Ngokusekelwe kulezi zihlanganisi, cishe zonke izidakamizwa manje ezaziwa ngokuthi ama-anabolic steroid, noma ama-anabolics, ziye zenziwa.
Bazikhombise kahle futhi njengezisusa zokukhula kwemisipha, kodwa ngokwengxenye bagcina omunye umphumela we-hormone yasekuqaleni - androgen.
Kungani sidinga imikhiqizo esekwe ku-testosterone: imininingwane engabonakali
Imvamisa, ama-anabolics, yiqiniso, asetshenziselwa "ukupompa". Eminyakeni engama-70-80s eyedlule, ama-Olimpi ahlala phansi kakhulu kubo. Ngalesi sikhathi, ukwakha umzimba kwaqala ukungena imfashini. AmaSteroid ayenesithakazelo ngisho nakubabafana abazeqa imfundo yokomzimba esikoleni.
ungakhuphi ivolumu yemisipha kuphela, kodwa namandla,
asize ukuzidlula ekuziqeqesheleni futhi alulame ngokushesha ngemuva (izakhi zawo zikhulisa ukwenziwa kabusha kwe-creatine phosphate, i-substrate yamandla emisipha yemisipha).
Ekuvikeleni ama-steroid, kufanele angezwe ukuthi asasetshenziswa ngokungaphumeleli esimweni sawo sokuqala - njengemithi. Babekelwe izinhlobo ezinzima ze-colitis ne-enteritis, lapho umuntu enesisindo esanele phakathi kokufakwa kabi kwamaprotheni. Ama-Derivatives e-testosterone abekelwe amadoda ngemuva kwe-oriectomy (ukususwa kwama-testicles, imvamisa isidingo sokuhlinzwa okunjalo okuvela kumdlavuza).